Etu esi ejikwa ama nke nwa anyị nwoke iPhone ma ọ bụ gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ejikwa Mobile ụmụ anyị na android na iOS
Paco L Gutierrez | | android, Apple, General
Ikekwe ndị eze ma ọ bụ fada ekeresimesi akpọbatala nwatakịrị n'ụlọ anyị ekwentị mbụ ha. Anyị na-asị nwatakịrị mana anyị ekwughi afọ ọ bụla n'ihi n'oge ugbua ọ bụghị nke doro anya maọbụ mgbe ọ kwụsịrị ịbụ nwatakịrị, ma ọ bụ gịnị bụ afọ akwadoro iji ụdị ngwaọrụ a. Ihe ga-edo anya bụ na Akwadoro na nwatakịrị nwere ekwentị mkpanaaka na ịntanetị ga-emerịrị njikwa nne na nna kacha nta gbasara ohere gị. Taa, anyị ga-ahụ otu ụfọdụ ndị nne na nna, ọbụlagodi ịbụ ndị na-asọ oyi na ụwa nke teknụzụ, nwere ike ịnwe njikwa a.
Maka nke a tupu anyị achọe ee ma ọ bụ ee ngwa ndị ọzọ, ugbu a site na nhazi nke aka anyị anyị nwere ọtụtụ nhọrọ iji jikwaa ọnụọgụ dị iche iche.
1 Otu esi aga n'ihu na iPhone
2 Otu esi eme ya ma ọ bụrụ na ị nwere gam akporo
3 Kidsmụaka Youtube
4 Njikọ Ezinụlọ Google
4.1 Na-eji na nhọrọ
Otu esi aga n'ihu na iPhone
Apple ọnụ nwere a dịgasị iche iche nke nhọrọ ịchịkwa ụmụ ngwaọrụ, ma ọ bụ biiri ma ọ bụ nwa nke.
Iji bido anyị ga-aga Ntọala wee pịa oge ojijiPịa Gaa n'ihu wee họrọ "Nke a bụ ngwaọrụ m" ma ọ bụ "Nke a bụ ihe [ngwaọrụ] nwata ahụ."
Site na nke a, anyị nwere ike ijikwa ma oge ejiri ọnụ ya na ngwa ndị a na-eji, n'ụzọ dị otú a nyochaa ma chịkwaa ihe niile nwata ahụ ji ngwaọrụ ahụ mee. I nwekwara ike igbochi nwa gị ka ị wụnye ma ọ bụ wepu ngwa, rụọ na-ngwa ịzụrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Nwere ike machibido ojiji nke wuru na-ngwa na atụmatụ. Ọ bụrụ na ịgbanyụọ ngwa ma ọ bụ ọrụ, ọ naghị ewepụ ya, kama ọ na-ezobe ya nwa oge. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ịgbanyụ Ozi Ozi, ngwa Mail agaghị apụta na ihuenyo ruo mgbe ị gbanye ya.
I nwekwara ike igbochi ịkpọ egwu nke ọdịnaya site na ọdịnaya doro anya, yana ihe nkiri sịnịma ma ọ bụ ihe ngosi onyonyo nwere etu esi ekwu ya. Ngwa nwekwara ọkwa nwere ike hazie site na mgbochi ọdịnaya.
Anyị nwekwara ike igbochi nzaghachi Siri ma ọ bụ nyocha ịntanetị, iji zere ọchụchọ ndị a na-achọghị. Ntọala nzuzo nke ngwaọrụ na-enye gị ohere ịchịkwa nke ngwa nwere ohere ịnweta ozi echekwara na ngwaọrụ ma ọ bụ na ngwaike ngwaike. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịhapụ ngwa netwọkụ mmekọrịta ka ịrịọ maka igwefoto, ka ị were foto ma bulite ha.
Otu esi eme ya ma ọ bụrụ na ị nwere gam akporo
Goodzọ dị mma maka nke a na gam akporo bụ ịmepụta ọtụtụ ndị ọrụ si Ntọala / Ndị ọrụ. Site na menu a, anyị nwere ike igbochi ọtụtụ ntinye gụnyere oku ma ọ bụ sms. Usoro a dị mma maka mgbe anyị ga-ahapụ nwa oge ka nwa ahụ nwee ọdụ, na-emekarị ọ ga-abanye na otu ma ọ bụ abụọ ngwa.
Egwuregwu Google na-enyekwa gị ohere ime ka njikwa ndị nne na nna. Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi na anyị nwere ike iwepu ọdịnaya site na afọ, si otú a na-enyocha ngwa iji zere ndị nwere ọdịnaya mmekọahụ ma ọ bụ ime ihe ike.
Enwere ike ịrụ ọkwa nke njikwa a ma na Apps na egwuregwu, ihe nkiri na egwu. Nhọrọ a nwere ike ịnweta site na menu ntọala / njikwa ndị nne na nna nke Google Play App n'onwe ya.
Ọ bụrụ na nhọrọ ndị a ezughị, anyị nwere ọtụtụ ngwa nwere ike inyere anyị aka n’ọrụ aE nwere imerime mana anyị ga - akwado ụfọdụ bara uru.
Otu n'ime ngwa kachasị ewu ewu maka ma ndị okenye ma ụmụaka bụ YouTube n'onwe ya, mana ka anyị maara nke ọma a na-ebugo ihe niile na YouTube, na ee ihe anyi choro bu na umuaka anyi enweghi ike inweta okenye. Ọ kachasị mma ibudata ngwa ụmụaka YouTube, ebe ha ga-enwe ike ịnweta ọdịnaya Enyi na Enyi.
Ngwa ahụ n'onwe ya nwere nhọrọ iji mara ma ọ bụ chịkwaa oge ụmụ anyị na-eji ekiri vidio, yana igbochi ọdịnaya nke anyị achọghị ka ha hụ. Ngwa a dị maka abụọ iOS dị ka android.
Njikọ Ezinụlọ Google
Ngwa a nke Google n’onwe ya mebere ka eji achịkwa ekwentị mkpanaaka ụmụaka. Na ngwa a ị nwere ike nyochaa oge nwa gị na-etinye na-achọ na mobile, nakwa maka oge ole ka ha jiri iji ngwa.
Na nke a ị ga-enwe ike ịmata ụdị ojiji ị na-enye ngwaọrụ gị, na ị nwere ike ịtọ oge ókè nke mere na ha na mobile na ma ọ bụ ọbụna na-egbochi ụfọdụ ngwa.
Iji ngwa a anyị nwekwara ike ịma n'oge niile ebe ngwaọrụ ahazi dị, dobe njedebe na visibiliti nke ọdịnaya a ga-ahụ na Playlọ Ahịa Google ma ọ bụ hazie Google's SafeSearch Gbochie ọchụchọ ndị okenye ma ọ bụ ndị nwere ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị maka ụmụaka.
Na-eji na nhọrọ
Ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ bara uru nke ngwa a nke dị maka maka iOS dika android:
Ebe: Can nwere ike ịgbalite ebe akụkọ ihe mere eme nke ngwaọrụ mara na a onwe map nke ebe nwa gị na-aga na-eme na ngwaọrụ ebe ha na-eji njikọ Google akaụntụ.
Iji ngwa: You pụrụ ịhụ ọrụ nke ngwa eji na ngwaọrụ na njikọ na akaụntụ. Kedu ngwa ndị ejirila n'ime ụbọchị 30 gara aga na ole.
Oge ihuenyo: You nwere ike hazie ọnụ ọgụgụ nke awa na ekwentị mkpanaaka nwere ike agbanwuru site na Monday ruo Sunday. E nwekwara nhọrọ Oge ndina, nke na-egosi awa ụfọdụ nke anaghị ekwe ka ekwentị mkpanaaka ba.
Aplicaciones: You nwere ike ịhụ ngwa arụnyere na ndị arụnyere na mkpanaka, ma gbochie ndị ị na-achọghị inwe ike iji.
Ntọala ngwaọrụ: Can nwere ike ijikwa ikikere na ntọala nke ngwaọrụ ejiri akaụntụ ndị ejikọtara. Nwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ hichapụ ndị ọrụ, gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ikike iji wụnye ngwa sitere na isi mmalite ndị amaghi, ma ọ bụ nhọrọ ndị nrụpụta. I nwekwara ike ịgbanwe ntọala ọnọdụ ma nyochaa ikike enyere site na ngwa ngwa.
Nke a nne na nna akara App-enye gị ohere amachi oge nwa gị nọrọ na ngwaọrụ, na-achịkwa ọdịnaya weebụ ị na-enweta ma gbochie ngwa ndị ị na-eji. Gị onwe gị kwa pụrụ ime otú ahụ lee n’ezie ihe nwa gi n’eme na ama n’oge niile. The free version nke ngwa-enye gị ohere ịchịkwa ruo otu nwaGbakwunye Ome ọzọ, ị ga-aga site na ụgwọ mbipute. Lee ị nwere ike ibudata ya maka iOS.
Ọnụahịa nke ụdị akwụ ụgwọ a sitere na from 42,95 kwa afọ maka ụdị dị ọnụ ala, ruo € 106,95 maka ụdị kachasị ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi ejikwa Mobile ụmụ anyị na android na iOS
Esi lee ihuenyo iPhone na TV na ChromeCast
Etu esi lelee ihe nkiri kacha mma nke Goya Awards 2020